कस्को डबलीमा नाच्दैछन् सिके ? – Janacharcha.com
» विचार/टिप्पणी अंक: 482
कस्को डबलीमा नाच्दैछन् सिके ?
एक पार्टिको दुई अध्यक्ष बनाएर केपी एण्ड प्रचण्ड विश्व राजनितिको "लेफ्ट ब्रोदर'' साबित भए
Janacharcha.com बिहिबार, साउन ३०, २०७६ मा प्रकाशित
चिरञ्जीवी केसी, विराटनगर
दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टि नेकपा माओवादी र एमालेलाई गत आम निर्वाचनमा नेपाली जन्ताले शान्ति, स्थायीत्व, रोजगार र विकासका लागी भनी अध्याधिक बहुमतले निर्वाचित गराँए । जनताको अभिमत जित्न चुनावको मुखाराविन्दुमा एकाएक काँग्रेसलाई लत्याएर नेपालका दुई लेफ्टिष्टहरु एकआपसमा गाभिने पनि बताए र केहि समयमा पार्टि एकता नि भयो । एकताका लागी यतीसम्म भयो की दुईवटा एभरो जहाजको पाईलटले आआफनो जहाजका सम्पुर्ण पार्टपुर्जा र २ वटा ईन्जीनलाई एक आपसमा जोडर संसारमा चमचकार नै देखाईदिए । जुन चमतकार राईट दाजुभाईले पनि गर्न सकेका थिएनन् ।
संसारमै कहि नदेखिएको एक पार्टिको दुई अध्यक्ष बनाएर केपी एण्ड प्रचण्ड विश्व राजनितिको “लेफ्ट ब्रोदर” नै साबित भए । तर लेफ्ट ब्रोदरको जहाजले भने नेपाली राजनितिकमा उडान भर्न सकेन । सायद लेफ्ट ब्रोदरले दुर्ई जहाजको पार्टपुर्जा राम्रोसंग जोड्न नसकेर होला जहाज वर्ष बितिसक्दा पनि धावनमार्गमा घस्रि मात्र रहेको छ ।
त्यती मात्र होईन, नेपाली राजनितिमा लेफ्ट ब्रर्दशले यतिसम्मको चमच्कार गरेका छन् की आर्को एउटा फाईटर प्लेनलाई टुईनअटर जाहजमा परिर्वतन गरी देशमा शान्ति, उमंग, अमन, चयन ल्याउने सपना नेपाली जनतालाई देखाएका छन् । फाईटर प्लेनको आवरण बदलिएपनि चरित्र र उद्देश्य बदलिएको छ छैन् भन्ने नेपाली जनतालाई अझै पनि शंका छ । के यो फाईटर साचिकै बदलिएको हो वा अन्तराष्ट्रि«य पाईलटको ईसारमा कुदिरहेको छ ? कसैले बुझ्न सकेका छैनन् ।
हुनतः पछिल्लो राजनितिक अवस्था हेर्दा परिवर्तित टुईन अटर निकै नै सिथिल देखीएको छ । अब भोलीको दिनमा यो टुईनअटर लेफ्टकै ईसारमा नाच्ने हो वा अन्राष्ट्र«य साहरामा आफ्नै उडान् भर्ने हो यो हेर्न बाँकी छ ।